Ndiri mudzimai ane makore 29 | Kwayedza
Ndiri mudzimai ane makore 29
20 Feb, 2015 - 00:02	 2015-02-20T07:45:48+00:00 2015-02-20T00:00:49+00:00 0 Views
CHIREGERAI zvenyu kufona pa0712 038 168 nekuti ndakamuwana wandaida ane mazirudo. Kutenda kukuru kunemi veKwayedza nechirongwa chenyu.
Makadii veKwayedza? Ini hangu ndinoda kutenda chirongwa chenyu ndakamuwana wangu anoda imba akatoroora. Tiri tose ndanga ndaneta nematsotsi saka vose vaifona pa0783 577 181 ngavachirega havo.
Ndiri mudzimai ane makore 29 ndinotsvaga murume anoda zvekuroora. Ndiri HIV negative, nhamba dzangu 0782 962 500.
Chiregedzai kuburitsa nhamba dzangu 0773 214 570 nekuti ndakawana anondida. VeKwayedza makaita basa.
Ndotenda veTishamwaridzane, ndakazomuwana wangu wandaida saka vose vaifona pa0774 949 902 chiregai henyu.
Ndinotenda veKwayedza, vanhu ngavachirega kufona pa0782 029 060 nekuti zvangu zvakaita nezita reJesu.
Ndiri kutsvagawo murume, ndine makore 24 nemwana 1 uye ndinoita basa remawoko. Vanoda ndibatei pa0715 564 673.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 23 ndinotsvagawo mukomana ane makore 25 kusvika 30 anoda Mwari. Ngaave anoshanda, ndiri negative. Ini ndinoita mabasa emawoko, nhare dzangu 0773 151 745.
Ndiri mudzimai ane makore makumi maviri nemasere uye ndiri kutsvagawo murume wekugara naye ari pachokwadi. Ini ndine vana 2 ndinoita basa remawoko, vanoda ngavandibate pa0733 030 921.
Ndiri murume ane makore 37 nevana 3 uye ndiri HIV+ asi ndichakasimba handirakidze kurwara. Ndinoda mudzimai ari kutoda zvemba izvozvi ane rudo anodawo zvekumasowe. Ini ndinoita mabasa emawoko. Anondida nhamba dzangu 0733 372 103.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore makumi matatu nerimwe uye ndiri negative pahutano. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 18 kusvika 26 anoda zvemusha. Ngaave ari negative zvekare. Anonamata kana asinganamate, ndibate pa0774 808 537.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagavo musikana ane makore 20 zvichidzika anoda zvemba. Handina vabereki, anoda ndibate pa0782 192 792 asi call me back kwete.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinodawo mukadzi ari pachokwadi anoda zvemba ane makore 18 kusvika 25. Ngaave ari HIv negative ari muHarare. Andifarira ndibate pa0779 672 056.
Ndiri mukomana anotsvaka musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 22. Anondida ngaandibate pa0783 938 159.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 30 nevana 2, ndakafirwa nemurume saka ndinodawo akafirwa seni asina chirwere. Ngaandibate pa0782 664 839.
Ini ndiri murume ane makore 53 ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 40 – 45 ari negative wekuroora. Ndinoda anoshanda, ini ndine tuck- shop. Nhamba dzangu idzi 0779 256 647.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26 ndinoda musikana ane makore 18 kusvika 23. Anoda anondibata pa0777 006 578 asi ngaave ari pachokwadi.
Ndiri murume ane hutano, ndine makore 29 nemwana mumwe uye ndinodawo mudzimai ane makore 19 kusvika 23 ane mwana mumwe kana asina. Akaita mutete ngaandibate pa0776 508 127.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 26, ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 24 zvichidzika anotya Mwari. Akazvininipisa, anoda kuwanikwa neni ngaandibate kana kutumira tsambanhare pa0775 032 082. Ndiri kwaMutare uye ndinodzidza paMutare Poly.
Makadii henyu? Handisati ndamboverengwa mubepanhau, ndiri murume ane makore 38 nevana vana vaviri uye ndinotsvagawo mukadzi ane makore 22 zvichidzika anoda zvekumusha. Nhare dzangu 0777 645 875.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 36 mwana 1. Ndinodawo murume ane makore 37 kusvika 47. Ari pachokwadi chero anoda zvekumusha andifarira nhare yangu iyi 0713 831 649.
Ndiri mukadzi ane makore 23 ndinotsvakawo murume anoda zvekuroora asiri HIV positive. Anoda ngaandibate pa0779 959 145.
Makaita basa veKwayedza, ndakamuwana wandaida saka vaifona panhamba dzangu dzinoti 0779 551 899 ngavachirega havo. Ndatenda.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 26 nevana vaviri, ndiri HIV+ asi handiratidzike. Ndinoda murume ane vana 2 kusvika 4, anenge andifarira ngaandibate pa0778 395 021 uye masms ndopindura.
Ndiri mukadzi ane makore 34, ndiri HIV uye ndinotsvakawo murume ari positive seni. Ngaandibate pa0773 132 024.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 47 nevana 2, HIV+ uye ndiri mupositori anotya Jehovha Mwari. Ndiri kutsvaga mukadzi ane mwana mumwe ane makore 30 – 37. Ngaandibate pa0716 966 236.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndiri kutsvaga musikana ari pachokwadi anoda zvekuroorwa ane makore 18 kusvika 22. Ndiri muHarare, anondida asi akaendawo kuchikoro ngaandibate pa0776 287 150 titaure.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 26 nemwana mumwe ndinodawo murume anondiroora. Ngaave anonamata ane makore 28 kusvika 40 anoda kunotorwa ropa. Nhare dzangu idzi 0774 070 648.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagavo musikana ane makore 20 zvichidzika anoda zvemba. Handina vabereki, anoda ndibate pa0782 192 792.
Ndiri mukomana ane makore 32 ndinotsvakawo musikana ane makore 22 – 29 akanaka? Ndiri mutyairi wegonyeti, vanodida ndibatei pa0733 066 581.
Ndiri murume ane makore 55. Ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 45-48 akanaka zvese nemwoyo anonamata. Ndinoda ari HIV negative, ndinonzi Manie. Ndibate pa0772 114 159.
Pamusoroi veKwayedza, ndini Zevezeve ndine makore 20 uye handisati ndaroora. Ndinotsvaga mukadzi, anoda ndibate pa0776 943 232.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 35, ndiri kutsvakawo murume ane makore 38 kusvika 45 anotya Mwari. Akavimbika uye ari HIV negative ngaandibate panhare yangu 0773 492 226.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 18 ndinotsvagawo shamwari (penpals). Vanoda ndibatei pa0777 225 322.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 24 zvichidzika. Vanoda ndibatei pa0782 891 814.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo murume ane makore 45 – 50 anoda zvemba ari pachokwadi, anonamata uye ari HIV negative. Ini ndine makore 36, ndinoda ane vana kana asina. Ngaafone pa0779 741 135.
Ndiri musikana ane makore 28 ndinodawo murume ane rudo, anoshanda uye anoroora. Vakaroora kwete, vamwe ndibatei pa0717 334 212.
Makadii? Ndiri murume ane makore 32 nemwana mumwe uye ndinotsvakawo mudzimai wekuroora ane makore 32 zvichidzika ane mwana kana asina.
Ari pachokwadi ngaafone kana kutumira sms pa0733 936 708. Ane makore 18 – 21 anoziva nhamo ngaandibate kana paWhatsapp pa0779 180 429.
Ndiri mukomana ane makore 24, Walter ndiro zita rangu. Ndiri kutsvaga musikana ane makore 18 kusvika 23.
Ndiri mutyairi, anoda ndibatei pa0783 613 156.
Ndinotsvagawo murume anoshanda anoda zvemba ane makore 47. Ini ndine makore 34, ndinobatika pa0783 905 556.
Ini ndiri murume ane makore 27 ndinotsvakawo shamwarisikana yekudanana nayo, wanano inozouya nekuwirirana kwedu asi ngaave asina chirwere. Nhamba dzangu idzi 0777 794 167.
Ndiri murume ane makore 28, ndine Class 2 yekutyaira motokari asi pari zvino handisi kushanda zvangu. Ndinotsvaga musikana akavimbika anogara muHarare ane makore 18-30. Ndibatei paWhatsapp pa0773 789 795.
Ini ndiri murume ane makore 34 nemwana 1 uye ndiri negative?
Ndiri kuda mukadzi kana musikana ane makore 25 — 29 ane mwana 1 kana asina.
Ngaave ari negative anoenda kuchechi, anogezawo.
Vanoda ndibatei pa0733 020 307.